Ogaden News Agency (ONA) – CWXO Warsaxaafadeed uu Soo Saaray Ayuu Digniin ku Siiyay Shirkadaha iyo Maamulada ku Hawlan Shidaalka Ogadenya
Warsaxaafadeed ay soo saareen Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLA) ayay kaga xogwarameen in taliye ka mid ah ciidanka gumaysiga Itobiya uu ku shirayay odayaal magaalada Qabridahare isagoo ku amray inay keenaan shaqaalihii dhirta ka jari lahayd wadada u dhexeysa ceelasha shidaalka Jeexdin iyo Jigjiga ilaa Jabuuti. Dhirta ayaa la doonayaa in laga jaro labada dhan ee wadan ilaa hal kilomitir, isagoo sarkaalkan ku amray odayaasha inay waliba dhalinyradaasi la yimaadaan faasaska ay dhirta ku jarayaan, waxaan la siin doonaa dhalinyarada ayuu ku yidhi raashin (Qamadi) looga soo qaadi doono bakhaarada haya’adda Cuntada ee WFP.
Sababta dhirta looga jarayo wadada ayuu sarkaalkan ku sheegay inay tahay si loo sugo amniga dhuunta (pipeline) shidaalka Ogadenya oo la doonayo in looga dhoofiyo Jabuuti. Wuxuu intaa u raaciyay Sarkaalkan in shirkadda Shiinaha ee POLY GCL oo maalgalinta samayanysa ay siisay dhismaha dhuuntan shirkad Canada laga leeyahay.
Wuxuu warsaxaafadeedka intaa raaciyay inay odayaashii diideen arintaa iyagoo sheegay in aanay ka qayb qaadanaynin xaalufinta dhirta dalkooda taasoo khasaare weyn u gaysanaysa nolosha xoolo dhaqatada. Askartii la socotay sarkaalka ayaa handadaad ku bilaabay odayaashii iyo digniin ah inay la kulmi doonaan caaqiba xun hadday diidaan amarka, hasa ahaatee odayaasha ayaa ku adkaystay in aanay ka qayb qaadanaynin mashruuc dhibaato u gaysanaya dalkooda.
Ciidanka Itobiya oo maalgalin ka helaya shirkadda Shiinaha ee POLY GCL, ayaa laga bilaabo bishii June 2013 si qasab ah uga raraysay dadka reer miyiga ah meelaha loo calaamadiyay baadhitaanka shidaalka iyo dhuunta qaadaysa. Dad aan ka yareyn 500,000 (Nus malyan) qoys ayay barakicinta mashruuca Gaaska saamaysay .
Waxay Itobiya u qaybisay dalka Ogadenya 23 goobo baadhitaan, waxayna aad isugu hawshay siday wado amaan ah ugu heli lahayd dhuuntaa ay doonayso inay ku dhoofiso shidaalka iyo gaaska Ogadenya. Wadooyinka la sahminayo waxaa kamida wadada Kenya ee Laamo, mid Waqooyiga Somliya oo Berbera marta iyo mid marta Xeebta Bariga Somaliya ee Garacad (Puntland).
Waxay intaa raaciyeen warsaxaafadeedka CWXO in Shiinaha ay siiyeen qalab casri ah oo lagula socdo is-gaadhsiinta N/hurayaasha iyo dhaq-dhaqaaqa reer guuraaga meelaha ay shidaalka ka baadhanayaan. Waxaa laga dhisay maqaalada Qabridahare meel la dhigay qalab casri ah oo Shiinaha laga keenay oo lagu dhagaysto is-gaadhsiinta, iyadoo waliba ay Shiinaha wax ka bixiyaan kharashka ku baxa Hawaarinta, maleesiyadan oo la tababaro habkii Janjaweedka ayay xukuumadda Itobiya ugu talagashay inay ku gumaado shacabka Ogadenya.
Waxay Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLA) u diyaariyeen ciidan si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay inay fashiliyaan arimaha baabi’inta dhirta iyo baadhitaanka sharcidarada ah ee shidaalka Ogadenya. Waxay CWXO halkii kasii wadi doonaan difaaca dadweynaha inta ay Itobiya ka ogolaanayso Xaqqa aaya-ka-tashiga shacabka Ogadenya.
Ugu dambayntii, Waxay CWXO digniin siiyeen dawladaha jaarka ah iyo maamul goboleedyada in aanay ku taageerin Itobiya dabiyada ay ka galayso shacabka Ogadenya. Waxay ugu baaqayaan inay faa’iido ugu jirto dhamaan shucuubta Geeska Afrika in loo helo xal waara dagaalada ka socda Ogadenya oo nabad kusoo dabaala gayiga Ogadenya.
Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya.
Ogaden-14 March 2015